Iindaba - Intshayelelo yaBanye bePlastikhi yokutya
Ibhotile yezemidlalo ye-PE
Glass & Ibhotile abicah
Iglasi kunye neSilicone Tumbler
Ikomityi kunye neNdebe
Intshayelelo kwiiPlastikhi ezithile zeBakala lokutya
Uhlalutyo loLwazi lwezeMpilo lwe-PP, i-PC, i-PS, Ibhotile yaManzi ePlastiki yeTritan
Iibhotile zamanzi zeplastiki zinokubonwa yonke indawo ebomini. Iibhotile zamanzi zeplastiki ziyanyamezela ukuwa, kulula ukuziphatha, kunye nesitayile ngokubonakala, ke abantu abaninzi bathanda ukukhetha iibhotile zamanzi zeplastiki xa bethenga iibhotile zamanzi. Ngapha koko, uninzi lwabantu aluyazi imathiriyeli yeebhotile zamanzi zeplastiki, kwaye zihlala zinganikeli ngqwalaselo kunye nokhuseleko lwezixhobo zebhotile yamanzi, kwaye zihlala zingakhathaleli ukhuseleko lwezixhobo zeebhotile zamanzi.
Izinto eziqhelekileyo zeebhotile zamanzi zeplastiki ziyiTritan, iplastiki yePC, iplastiki yePC, iplastiki yePS. I-PC yi-polycarbonate, i-PP yi-polypropylene, i-PS yi-polystyrene, kunye ne-Tritan sisizukulwana esitsha se-copolyester.
I-PP yenye yezinto ezikhuselekileyo zeplastiki okwangoku. Iyakwazi ukumelana namaqondo obushushu aphezulu kwaye inokutshiswa kwi-oven microwave. Inokumelana nobushushu obugqwesileyo, kodwa ayomelelanga, kulula ukuyaphula, kwaye ine-transparency esezantsi.
Izinto zePC ziqulethe i-bisphenol A, eya kuthi ikhutshwe xa ivezwe ubushushu. Ukuthatha ixesha elide ukulandela umkhondo we-bisphenol A kuya kubangela ingozi kwimpilo yabantu. Amanye amazwe kunye nemimandla ithintele okanye yathintela i-PC.
Izinto ze-PS yinto ebonakalayo ebonakalayo ephezulu kakhulu kunye ne-gloss ephezulu. Kulula ukuyiprinta, kwaye inemibala ngokukhululekileyo, ayinasongo, ayinambitheki, ayinetyhefu, kwaye ayibangeli ukukhula kwefungus. Ke ngoko, iye yaba ngomnye wemathiriyeli yeplastiki eyaziwayo.
Abavelisi bajongene noxinzelelo lwempilo kunye nokhuselo lokusingqongileyo kwaye bajonge izinto ezinokuthi zithathe indawo yePC.
Kule mvelaphi yentengiso, i-Eastman yase-United States ivelise isizukulwana esitsha se-copolyester Tritan. Ziziphi iingenelo zayo?
1. Ukuvumeleka okuhle, ukuhanjiswa kokukhanya> iipesenti ezingama-90, i-haze <1%, kunye nokubengezela okufana nekristale, ke ibhotile yeTritan icace gca kwaye icacile njengeglasi.
2. Ngokuchasene nokuchasana nemichiza, izinto zeTritan zihlala ziluncedo ngokupheleleyo, ke iibhotile zeTritan zingacocwa kwaye zibulawe iintsholongwane ngezicoci ezahlukeneyo, kwaye azoyiki ukubola.
3. Ayinazinto zinobungozi kwaye iyahlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo kunye nempilo; ubulukhuni obuhle, amandla aphezulu empembelelo; ukumelana nobushushu obuphezulu phakathi kwe-94 ℃ -109 ℃.
Igumbi 503, Shengyue Building, No. 227 Tongji Road, Jiangbei District, Ningbo City, China.